Baqattoonni Bangazi Keessaa Sodaan Keenya Daran Hammaate Jedhu
Bitootessa 03, 2011
Baqattoonni Libiyaa magaalaa Bangazi keessaa guuramanii handaara galaanaatti geessaman ibsa kennaniin sa’aatilee 74 keessatti gamasii ba’uu baannaan carraan qaban du’uu ta’uu mala jechuu dhaan hawaasini naannoo itti himuu isaanii beeksisan.
Baqattoonni Bangaazii andaara galaanaa jiran kun haalli nuti keessa jirru guyyaa dhaa gara guyyaatti yaaddessaa ta’aa jira jedhan. Hawaasni naannoo sanaa kanneen kana dura garaa laafuu dhaan isaan gargaaraa turanis Kanneen biroon gara biyya ofiitti deebi’aa jiran, asii deemuu baannaan hawaasi keenya isin fixa nuun jedhan jedhu.
Gargaarsa dubartoota keenyaaf sodaa rabbiif jecha kennaa turan illee nu irraa dhabanii jiran jedhu. Mootummaan Itiyoopiyaa immoo gama isaan lammiiwwan isaa Libiyaa keessa jiran qonsiilaa biyya Sudaanii gamas jiru dhaquu dhaan akka galmaa’an gaafatee jira.